Dowladda Soomaaliya oo u digtay ciidamada howlgalka AMISOM – Bandhiga
Dowladda Soomaaliya oo u digtay ciidamada howlgalka AMISOM
Qoraal ka soobaxay wasaaradda warfaafinta Xukuumadda Federalka Soomaaliya ayaa looga hadlay dhacdadii ciidamada AMISOM ay ku dileen dad shacab ah waxaana dowladda Soomaaliya ay sheegtay in markale aan la aqbali doonin.
Qoraalka ayaa sidan u qornaa:
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay cambaareynaysaa dhacdadii ka dhacday degmada Heliwaa ee Gobolka Banaadir 6dii Nofeembar 2018ka, taas oo ay ku lug lahaayeen Ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), ayna ku naf waayeen muwaadiniin Soomaaliyeed.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ku wargelinaysaa Xafiiska Midowga Afrika ee Soomaaliya in si degdeg ah loo soo dhammeystiro baaritaanka dhacdadaan, loona hor keeno sharciga cid kasta oo ay ku caddaato in ay ku lug lahayd, Dowladda Soomaaliya waxa ay billaabeysaa baaritaan gaar ah oo la xiriira dhacdadan.
In kasta oo ay Dowladda Federaalka Soomaaliya garowsantahay duruufaha ay ku shaqeeyaan ciidamada dalalka aan walaalaha nahay ee ka midka ah hawlgalka AMISOM iyo dhiigga ay ku bixinayaan nabadaynta iyo xasilinta Soomaaliya, haddana waajibka ugu horreeya ee dowladda Soomaaliya waa ilaalinta nafta iyo hantida Ummadda Soomaaliyeed.
Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dhammaan Goleyaasha Dowladda waxa ay tacsi u dirayaan ehelada dadkii ku geeriyooday dhacdadan, waxa ayna farayaan hay’adaha ay quseyso la socodka iyo daryeelka caafimaad ee dadkii ku dhaawacmay.
Ciidanka Xoogga Dalka oo howlgallo qorsheysan ku khaarijiyay xubno katirsanaa Al shabaab
Maamulka Gobalka Banaadir oo qorsheynaya inuu la wareego xarumaha caafimaad ee ku yaala Muqdisho
Christiano Ronaldo oo diiday heshiis ku kacaya 6 Milyan oo Doller oo Sacuudiga u soo bandhigay